Dadka Kenya oo ka codsaday abaabulayaasha doodda 2-aad ee madaxweynanimada in ay ku hadlaan Sawaaxili - Sabahionline.com
Kenyaanka oo u riyaaqay gelitaankii hay'ada la-dagaalanka musuqmaasuqu ee xar...
Erdoğan oo si wayn loogu soo dhaweeyay Soomaaliya
Dadka ka soo goostay al-Shabaab oo cafis ka doonaya xukuumadda Kenya
Odayaasha Soomaaliyeed oo ka horyimid amarkii al-Shabaab ee ahaa inay ka foga...
Dadka Kenya oo ka codsaday abaabulayaasha doodda 2-aad ee madaxweynanimada in ay ku hadlaan Sawaaxili
Waxaa qoray Rajab Ramah oo Nairobi jooga
Febraayo 22, 2013
Musharixiinta madaxweynanimo ee dalka Kenya waa in ay doodda labaad ee Isniinta (25-ka February) ku hadlaan luuqadda Sawaaxiliga si markaa dhammaan muwaaddiniinta ay u fahmaan, sidaana waxa qaba culimo iyo muwaadiniin.
Dad Kenyan ah oo daawanaya dooddii ugu horreysay ee waji-ka-waji ah ee Nairobi ku dhex marta musharixiinta madaxweynanimo 11-kii February. [Tony Karumba/AFP]
Boobka dhulka iyo musuq-maasuqa oo diiradda lagu saaray dooddii labaad ee madaxweynenimada Kenya
Kenyatta oo aan ka qayb-galayn doodda labaad ee madaxweynenimada
6 musharrax oo ka qayb gali doona dood loo qabanayo tartanka madaxweynenimada Kenya
Professor Clara Momanyi, oo barre ka ah Jaamacadda Katooliga ee Bariga Afrika ayaa sheegay in Chakita, oo ah urur ay madaxd ka tahay kaasoo Kenya uga ololeeya kor u qaadidda Sawaaxiliga, uu warqad u qoray qaban-qaabiyayaasha doodda, laguna weydiitay in ay luuqadda ku beddelaan sawaaxili, taasoo ah luqadda ugu badan ee looga hadlo Kenya.
Labada luuqadood ee Sawaaxiliga iyo Ingiriiska ayaa dastuurka Kenya uga diiwaan-gashan in ay yihiin luqadaha rasmiga, balse kaliya dadka reer Kenya ee soo maray waxbarashada rasmiga ah ayaa bartay kuna hadla Ingiriiska. "Go'aankii lagu door-biday in luuqadda Ingilishka lagu hadlo dhammaan dooddii [11-kii February] waxa uu ahaa mid eex ah," ayay Momanyi u sheegtay Sabahi. "Waxa ay bannaanka u tuurtay qeyb ballaaran oo ka mida Kenyanka kuwaa oo aan aqoon [Ingiriiska]. Tani waa hab kamid ah faquuqa kana hor-imaanaya dastuurkeena kaa oo qof walba oo Keenyaan ah siinaya xoriyad ah in aan lagula dhaqmin caddaalad-darro ku saleeysan luuqad ama isir."
"Sidaa daraaddeed waxaa dalbanaynaa in doodda soo socota in ay daadihiyayaashu su'aalaha ku waydiiyaan Sawaaxili iyadoo musharixiintana ay ku jawaabayaan isla luuqaddaa," ayay tiri.
Wachira Waruru, oo ah agaasimaha maamulka ee Royal Media Service, ahna guddoomiyaha gudiga doodda madaxweynanimada, ayaa sheegay in dadka aan ku hadlin luuqadda Ingiriiska ay qabaan walaac dhab ah.
"Dad badan oo reer Kenya ah oo doodda ka dhagaysanayay raadiyayaashooda iyo talifishinadooda ayaa laga yaabaa in ay dooddu ku seegtay caqabado xagga luuqadda ah," ayuu u sheegay Sabahi. "waxaan cabashada ka helnay aqoonyahannada, waxaannuna raadinaynaa annaga oo la shaqeeynaynaa inta kale ee ka midka ah kooxda qaban-qaabiyayaasha habab aan doodda u soo dhex-galin karno luqadda Sawaaxilga."
Ka gudbidda caqabadaha luuqadda
Peter Otieno, oo ah 39-jir taksi ku wada xaafadda Westland ee Nairobi, ayaa Sabahi u sheegay in aanu ku qancin dooddii koowaad.
"Waan dhararayay doodda maxaa yeelay waxaan [filayay] in aan xog badan ka heli doono murashaxiinta madaxweynenimada iyo waxa ay ugu yaallaan Kenya," ayuu yiri Otiena, oo aan waligiis dugsi dhigan. "Balse markii aan daaray raadiyahayga gaariga si aan u dhagaysto doodda, waan niyad-jabsanaa seddexdii saac, mafahmi karin waxa laga wada hadlayay maxaa yeelay mafahmi karo luuqadda Ingiriiska."
Waxa uu sheegay in uu ku khasbanaaday in uu ku tiirsanaado saaxiibadii oo "wax xoggaa ka yaqaan luuqadda" si ay ugu sheegaan waxa looga wadahadlayay doodda.
"Tani waa sababta aan u door-bidaayo in wareegga labaad lagu hadlo Sawaaxili si aan markaa u helo xog aan iyaga toos uga maqlay," ayaa yiri Otieno.
Salome Nduku, oo Google-ka kenya, kula shaqeeya ka sifadiisa khabiir dhinaca luqadda ah, ayaa Sabahi u sheegay in inta badan dadka Kenya ay caro taas la mida ku soo bandhigeen warbaahinta bulshada.
Nduku, oo ah turjumaan farriimaha Sawaaxiliga u baddala afka Ingiriiska ayaa sheegay in Google isha ku heesay farrimihii lagu soo qoray warbaahinta kadib dooddii ugu horeeysay waxa ayna ogaatay in inta badan "Kenyan-ku rabaan in [doodda labaad] lagu qabto Sawaaxili si ay u fahmaan".
Kithakawa Mbiera, oo ah bare Sawaaxili-ga ka dhiga Jaamacadda Nairobi, ayaa sheegay in doodda madaxweynenimadu ay ka dhigantahay fursadda kaliya oo ay dad badan oo Kenyan ahi ku ogaan karaan arrimaha muhiimka ah ee la xirira qaybsiga dhulka iyo khayraadka isla markaana ay ku miisaami karaan murashaxiinta u tartamaya xafiiska. "Siyaasiyiinta ayaa ku khudbeeya Sawaaxiliga marka ay dadka lahadlayaan [banaanbaxyada ololaha] maxaa yeelay waxa ay qiimeynayaan xaqiiqda ah in Kenyan badani aysan fahmi karin Ingiriiska," ayuu yiri Mbiera, isagoo intaana ku sii daray in ay tahay in isla sidaa la sameeyo inta lagu guda jiro doodda.
Waxa uu sheegay in haddii lagu fashilmo in Sawaaxilga lagu isticmaalo kulamada sidan oo kale u ballaaran in ay taasi keeni doonto luminta aqoonsiga iyo midnimada Kenya.
"Waxa aannu nahay waxannu ku nahay sababtoo ah luqadda aan ku hadlno, waana Sawaaxiliga, taasoo aan sidoo kale u isticmaalno aaladda ay ku wada-xiriiraan dadkayaga u kala qaybsan qowmiyadaha. Sidaa darteed, doodaha caynkan oo kale ah waa in mudnaan loo siiya sida in ay calaamad u yihiin qarannimadeena iyo midnimadeenna. Ma jeclaysatay maqaalkan?
Isku diiwaan-gali warsideheenna oo santuukhaaga ku hel maqaalladeenii ugu dambeeyay ee la daabacay
JUSTUS KENGERE ONCHOMBA
February 23, 2013 @ 11:59:42AM
Adeegsiga af sawaaxiliga iyo af ingiriisiga labada midna dhib kuma aha dadka reer Kenya
February 23, 2013 @ 03:10:16AM
kenya waa wadan musuqmasuq aah waa leyahay inti dorashadi aay dhacin daadka ha xararen waa lagayaba inu sidi 2007 oo dad badan dimani doono
February 22, 2013 @ 07:22:02PM
Xaqiiqdi waa muhiim in dooda luuqada siwaaxilka aay kudhacdo. Waan dhararayay doodii hore maxaa yeelay waxaan rabey in aan xog badan ka helo murashaxiinta madaxweynenimada iyo waxa ay ugu yaallaan Kenya. Balse markii aan daaray raadiyahayga gaariga si aan u dhagaysto doodda, waan niyad-jabsanaa seddexdii saac, mafahmi karin waxa laga wada hadlayay maxaa yeelay mafahmi karo luuqadda Ingiriiska sababta oo ah waligey dugsi madhigan. Waxaay igu khasbtay in aa ku tiirsanaado saaxiibaday oo xoggaa ka yaqaan luuqadda si ay iigu sheegaan waxa looga wadahadlayay doodda.
Tani waa sababta aan u door-bidaayo in wareegga labaad lagu hadlo Sawaaxili si aan markaa u helo xog aan iyaga toos uga maqlay. Waxaan jeclahay baddi dadka kunool waqooyi bari in aay ayagaana u fiicantahay in dooda siwaaxil lagu qabto sababta oo ah waxaay ubadanyihiin dad aan akhrisan. Waxaan filayaa in abaabulayaasha dooda labbaad ay texgelindoonaan codsigaayna.
Waad madsantahiin dhamaan.
February 22, 2013 @ 06:44:43PM
waxaa wacnaan lahayd in Bariga Afrika laga qadariyo af sawaaxiliga
Al-Shabaab oo 43 isugu jira beeraleey iyo xoolo-dhaqato Soomaali ah u haysta madax-furasho
Xagjiriinta al-Shabaab ayaa 43 rayid ah ka qafaashay Goof Gaduud, oo u dhow Baydhaba, una haysta ...
Nkaissery oo amray in baartaan lagu sameeyo rabshadihii Narok
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Xiriirnita Xukuumadda Qaranka Joseph ole Nkaissery ayaa amar ku bixi...
Kenya oo ku amartay macallimiinta in ay ku noqdaan dugsiyada waqooyi-bari
Komishanka Adeegga Macallimiinta Kenya (TSC) ayaa uga digay macalimiinta ka shaqeeya gobollada Ga...
Tanzania oo xirtay wagayska weyn ee East African
Tanzania ayaa joojisay daabacaadda wageeyska weyn ee heerka gobol, The East African, iyada oo dib...
Xildhibaanno Soomaali ah oo ku hanjabay in ay diidi doonaan gole wasiirro oo ay ku jiraan wasiirradii hore
Laba kutlad oo ka mida xildhibaanada Soomaaliya ayaa Isniintii (26-kii January) uga digay Ra'iisu...
Dacwadda Ponda oo ka bilaabatay maxkamadda Morogoro
Maxkamadda wadaadka Muslimka Tanzanian ka ah Sheikh Ponda Issa Ponda ayaa Isniintii (26-kii Janua...
Ra'iisul-wasaaraha Jabuuti oo guddoominaya wadatashi laga yeelanayo dib-u-habaynta
Ra'iisul-wasaaraha Jabuuti Abdoulkader Kamil Mohamed ayaa Axaddii (25-kii January) shir-guddoomiy...
Wasiirka tamarta Tanzania oo isku casilay fadeexad musuqmaasuq
Wasiirka Tamarta iyo Macaadinta Sospeter Muhongo ayaa iscasilay Sabtidii (24-kii January), sidaan...
2 lagu dilay dibadbax musuqmaasuq diid ah oo ka dhcay Gobolka Narok
Laba qof ayaa la dilay askari bilays ahna waa la dhaawacay intii uu socday dibad-bax looga soo ho...
Ciidamada huwanta oo al-Shabaab ka xoreeyay tuulooyin ku yaal Bakool
Askarta ciidamada Soomaaliya oo ay kaabayaan Kuwa Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM)...
Qaxootiga Soomaalida ee xeryaha Kenya oo saf ugu jira in ay ku noqdaan dalkooda
Soomaali badan oo deggan xeryaha qaxootiga Kenya ayaa gargaar ha ke heleen hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ama ha ka waayeene, waxay muujinayaan sida ay u danaynayaan in ay ku noqdaan dalkooda hooyo.
Soomaalida oo jawaab ka bixisay werarkii Paris, shaqaaqooyinkana dhaleeceeyay
Al-Shabaab oo 'kala furfurmaysa' kadib duqeeyn cirka ah iyo ka soo goosasho
Ammaanka Kenya waxa uu u baahan yahay wax ka badan baddal hoggaaneed: falanqeeyayaal
Odayaasha Soomaaliyeed oo ka horyimid amarkii al-Shabaab ee ahaa inay ka fogaadaan shirweynaha Gobolka Badhtamaha
Mugdi hareeyay xaaladda markhaatiga ICC Meshack Yebei
Soomaaliya oo la dagaalamaysa magacyada been-abuurka ah ee warbaahinta bulshada
Sidee baa ugu wanaagsan oo ay qurba-joogtu ku caawin kartaa Soomaaliya?
In ay si toos ah taageero lacageed ugu diraan qaraabadooda joogta Soomaaliya.
In ay maal-galiyaan hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mashaariicda dib-u-dhiska iyo horumarka.
In ay wakhtigooda iyo aqoontooda kula soo noqdaan Soomaaliya.